Iihelikopta eIndiya: Kungcono kwiziseko zophuhliso kunye noKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Iihelikopta eIndiya: Kungcono kwiziseko zophuhliso kunye noKhenketho
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Utyalo mali • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
by UAnil Mathur-eTN India
Ibhalwe ngu UAnil Mathur-eTN India
Umgaqo-nkqubo omtsha wee-Helicopter ezili-10, "Iseli ye-Helicopter Accelerator," yabhengezwa kwaye yamiselwa yi-India Ministry of Civil Aviation.
Iihelikopta zidlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lwezoqoqosho kwaye ziyinxalenye ebalulekileyo yendalo yezentlalo.
Iipaseji zehelikopta ziya kusekwa kwizixeko ezili-10 ezinemizila engama-82, ezi-6 zinikezelwe, ukuqala.
Ii-Helipads kufuneka zisetwe ecaleni kweendlela zoncedo ukunceda ukuphuma kwamaxhoba engozi kunye neendlela ezi-3 ezichaziweyo.
Umnumzana Jyotiraditya Scindia, umphathiswa wezokuhamba ngenqwelomoya, namhlanje uthe ingcinga yehelikopta ayonto intsha e-India, kodwa ifuna ukwandiswa ngolwakhiwo oluya kwenza ukuba umzi-mveliso usebenze ngokubambisana norhulumente ekuncedeni abantu. Ukungena kwehelikopta elizweni kufuneka kube yinto ephambili, utshilo. Wongeze ngelithi kufuneka kubonakaliswe imbonakalo yomhlaba eza kuvumela abasebenzisi ukuba banikeze iinkonzo zabo ngomoya wobuzwe bokwenyani, kwaye iingcinga kufuneka zilandelwe zizenzo.
Ethetha kwiNgqungquthela ye-3 ye-FICCI yee-Helicopter ye-2021, "[imeyile ikhuselwe]: Ukukhawulezisa ukukhula koShishino lweehelikopta zaseIndiya kunye nokuPhucula ukuNxibelelana komoya, "Umnumzana Scindia ubhengeze umgaqo-nkqubo omtsha wee-10 zeehelikopta. Ecacisa malunga nomgaqo-nkqubo, uMnu Scindia uqaphele ukuba i-Helicopter Accelerator Cell esekwe liCandelo loMphathiswa Wezokundwendwela Kwabantu eliya kujonga kuyo yonke imiba yemizi-mveliso kwicandelo.
Ngaphaya koko, uMphathiswa ubhengeze ukuba njengenxalenye yalo mgaqo-nkqubo, zonke iintlawulo zokuhlahliswa komhlaba ziyakucinywa kwaye iidipozithi zokupaka ziya kubuyiselwa. “Siza kuba sisixhobo onokusisebenzisa ukuququzelela ukukhula kwakho. Inyathelo lesithathu lomgaqo-nkqubo liza kuqinisekisa ukuba amagosa e-AAI kunye ne-ATC afikelela kweli shishini ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuba uqeqesho olwaneleyo lunikwa bonke abantu malunga nemiba yehelikopta, utshilo.
Ukulungiselela ukwenza ushishino, uMphathiswa wazise ukuba iqela elicebisayo lenziwe kwiihelikopta. “Amanqaku eentlungu zeshishini aya kuqwalaselwa [kunobhala] kwinqanaba lam. Imicimbi nemithetho ephelelwe lixesha iyakuhoywa, ”utshilo.
Umnumzana Scindia wongeze ukuba iiHeli ezi-4 zeHeli kunye neeYunithi zoQeqesho ziya kusekwa eMumbai, Guwahati, Delhi nase Bangalore. Uye wathi iiHelicopter Corridors ziya kusekwa kwizixeko ezili-10 ezinemizila engama-82. UMphathiswa ngoku uza kuqala ukusebenza kwiindlela ezi-6 ezinikezelweyo zokuqalisa. Iindlela eziphambili ezichongiweyo yiJuhu-Pune, Pune- Juhu, Mahalaxmi Racecourse-Pune, Pune - Mahalaxmi Racecourse, Gandhinagar - Ahmedabad, nase Ahmedabad - Gandhinagar.
Umnumzana Scindia ukwakhankanye ukuba ii-Helipads ziya kusekwa ecaleni kweendlela ezichongiweyo ukuze ukukhutshwa kwamaxhoba kwenzeke ngokukhawuleza. "I-Delhi-Bombay Expressway, Ambala-Kotputli Expressway, kunye neAmritsar - Bathinda - Jamnagar Expressway bazakuba yinxalenye yeHEMS yethu (iiHelicopter Emergency Services)," wongeze watsho uMphathiswa.
U-Heli-Disha, incwadana ye-Administrative Guidance Material on Civil Helicopter Operations, neyakhutshwa kulo msitho, iza kunikwa bonke abaqokeleli kuzo zonke izithili zelizwe, uMphathiswa ubhengeze. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ulwazi luyenziwa kulawulo lwesithili, wongeze watsho.
Kwasungulwa ipothali esembindini kaHeli Seva kulo msitho njengenxalenye yoMgaqo-nkqubo weehelikopta omtsha. Imephu yendlela ye-Heli Emergency Medical Services (i-HEMS) nayo yakhutshwa kumsitho.
Ngokubanzi (uGqr) VK Singh (Retd.), Umphathiswa kaRhulumente, Icandelo loMphathiswa Wezokuhamba Kwabantu, kunye noMphathiswa Wezwe, Icandelo loMphathiswa Wezendlela, Ezothutho noohola bendlela, URhulumente wase-India, wathi iihelikopta zinento yazo. Ukugcinwa kwabo kunye nokugcinwa, nangona kunjalo, kuyabiza kwaye ngenxa yoko kuye kwasetyenziswa kancinci kuthutho lwabakhweli. “Siyathemba ukuba sizakukwazi ukunciphisa iindleko kwaye siyenze ibe noqoqosho. Eli licandelo elidinga ukukhuthazwa kwaye lifuna ukukhuthala okukhulu ngokubhekisele kwinto enokusetyenziselwa yona, ”wongeze watsho.
Umnumzana Pushkar Singh Dhami, Umphathiswa oyiNtloko, Urhulumente wase Uttarakhand, uthe i-Uttarakhand ixhomekeke kukhenketho kuqoqosho lwayo, olufuna uqhagamshelo oluhle. "Sijonge kwiihelikopta [s] zokudibanisa abantu Sizama ukwenza ihelikopta [is] sithuthi sabantu abaqhelekileyo kwaye sijolise ekunikezeleni ngeyona nkonzo ifanelekileyo xa kufikwa kwiihelikopta, utshilo.
Umnumzana Satpal Singh Mahara, Umphathiswa Wezokhenketho, Unkcenkceshelo, iNkcubeko, kunye noSihlalo, iBhodi yezoPhuhliso lwezoKhenketho e-Uttarakhand, wathi ngeenjongo zokuqinisa unxibelelwano, urhulumente wenza iinzame zokuhamba ngeenqanawa zolwandle ukuba ziye kuhlala eNanak Sagar. “Oku kuyakunceda ekwakheni unxibelelwano. Urhulumente ujolise ekubeni ngumboneleli ngenkonzo. "Sikwacela ukuba kwakhiwe iSikhululo senqwelomoya eHaridwar," utshilo.
UNks Usha Padhee, Unobhala odibeneyo, uMphathiswa wezoPhapho lwaBantu, uRhulumente wase-India, iHelicopter, udwelise inani lamanyathelo athathwe ngu-Mphathiswa Wezokundwendwela Kwabantu. “Isikhululo sehelikopta esikhawulezisayo siza kubonelela ngeqonga kuwo onke amahlakani eshishini ukuba asebenze ngokuhlangeneyo nangokusebenzisana norhulumente. Ethetha ngoHeli Sewa, UNkosazana Padhee uthe esi siza siza kutshintsha umdlalo njengoko beqhubeka nokuyisebenzisa kwaye betyebisa imixholo yayo. "Esi siza sisekwe kwisicelo sabasebenzi, kwaye sinethemba lokuba ukucocwa kweehelikopta kuya kwenzeka ngokukhawuleza," wongeze watsho.
Umnumzana Dilip Jawalkar, u-CEO, iBhodi yezoPhuhliso lwezoKhenketho e-Uttarakhand, wathi indima yeehelikopta ibaluleke kakhulu ngakumbi kwiindawo ezikude nezineenduli ezinjenge-Uttarakhand. Iiteksi zikaHeli zongeza umlinganiso wokubandakanya bonke abantu, ngakumbi abantu abadala, abantwana kunye nabantu abahlukileyo ababhadlileyo. Iihelikopta zibonelela ngeendlela ezikhawulezayo zonxibelelwano kwiindawo ezikude nezingafikelelekiyo kwaye zidlala indima enkulu kulawulo lwentlekele nakwimisebenzi yokuhlangula kurhulumente.
Umnumzana Sanjeev Kumar, uSihlalo, iGunya leZikhululo zeenqwelo moya eIndiya, wathi iihelikopta zidlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lwezoqoqosho kwaye ziyinxalenye ebalulekileyo Aviation yoluntu kwendalo.
Ugqirha RK Tyagi, uSihlalo, iFICCI General Aviation Taskforce, kunye nalowo wayesakuba nguSihlalo, iHindustan Aeronautics Limited (HAL), kunye nePawan Hans Helicopters Limited (PHHL), uthe i-India namhlanje inamandla eenqwelo moya ezingama-236 ezahlulwe phakathi kwabaqhubi abangama-73. Olu shishino luqhekeke kakhulu lunabasebenzi abathathu kuphela abaneehelikopta ezingaphezu kweshumi. I-Indiya kufuneka ibe neenqwelo moya ezingaphezulu kwama-3 10 ngenani elinikezelweyo kwiinkonzo zonyango ezingxamisekileyo, nomthetho nocwangco, ”utshilo.
Umnumzana Remi Maillard, uSihlalo, i-FICCI Civil Aviation Committee, kunye noMongameli kunye ne-MD, i-Airbus India, bathi ubume be-India kunye nokusasazeka kwabemi kuyenza ibe lilizwe elifanelekileyo lehelikopta. “Iihelikopta yinxalenye ephuhliswe kakuhle kuqoqosho oluninzi lwehlabathi, ukanti imakethi yehelikopta iyancipha eIndiya. Iihelikopta zisabonwa njengeyona nto yokudlala izityebi. Urhulumente kunye nomzi mveliso kufuneka [i] batshintshe umbono wehelikopta - ukuthomalalisa iihelikopta ukuba zibekeke endaweni yokwamkeleka, ”utshilo.
Umnumzana Dilip Chenoy, Unobhala Jikelele, i-FICCI, uthe ishishini lokuhamba ngenqwelomoya eIndiya liye lavela njengelinye lamashishini akhula ngokukhawuleza kwilizwe. "Iihelikopta zingadlala indima ebalulekileyo kuphuhliso lwezoqoqosho, kwaye ukubaluleka kweehelikopta kuphinda-phinda ngenxa yeempawu zokusebenza kwe-rota craft kunye nokuphathwa kwepropathi phantsi kweemeko eziphantsi zomoya," utshilo.
UAnil Mathur-eTN India
UHarley-Davidson Ubetha ukuphumelela okukhulu
Abantu abane babulawa kwinqwelomoya yaseCzech Republic naseFrance.
Indawo entsha yokuphumla ye-USO ixhasa amalungu enkonzo ePittsburgh...
ITel Aviv, iNaples, iOdessa, iKyiv, iDubai kunye neAmsterdam...
Iihotele zaseHawaii UkuTsala imali engaphezulu kwale minyaka mibini idlulileyo